China Hot inyauka glue pfuti, yemagetsi simbi inonamira pfuti, inopisa mweya pfuti, epurasitiki inotungidza pfuti, tin absorber fekitori uye vagadziri | Boda
Yakapisa yakanyunguduka pfuti yeglue, ine chaiyo kutyora mhedzisiro, akasiyana mabhuru, anogona kusangana nezvinodiwa zveakasiyana ekugadzira mitsara, yakasarudzika firita dhizaini, inokodzera kuchenesa uye mamwe maitiro. Iyo pfuti inopisa yakanyunguduka yeglue haigoni kuora kana ichishandiswa pa300 ℃ kwenguva yakareba, uye mubatanidzwa unogara wakasimba. Naizvozvo, inopisa yakanyunguduka namira muchina unoshandiswa zvakanyanya mufekitori fekitori, chikafu fekitori, kurongedza fekitori, nezvimwewo Kuti uwane zvinokanganisa zve otomatiki pfuti pfuti uye kusangana nezvinodiwa zvekushandisa nhare, goko remuviri wepfuti inoitwa yezvinhu zvakaunzwa kunze kwenyika, zvinogona kumira kwakanyanya tembiricha ye300 ℃ uye ive shuwa kuti hapana deformation pasi pekupisa kwakanyanya kwenguva yakareba. Pfuti muviri wakareruka uremu uye nyore kushandisa. Iyo yakasarudzika yekuchengetedza mudziyo dhizaini inogona kudzivirira iye opareta kubva kukanda zvisina hanya kana achishanda; mubatanidzwa wepasirese wakasanganiswa neEuropean tekinoroji yepamusoro inoita kuti zvive nyore kushanda uye kusimba; iyo sikuruu, ubvise, gwapa uye mhute fiber inogona kushandiswa mumaindasitiri akasiyana
Magetsi simbi simbi chishandiso chakakosha chemagetsi kugadzirisa. Chinangwa chayo chikuru ndechekuchereredza Du zvikamu uye waya. Nenzira iyi, pamusoro peiyo yakachena yekunamatira zvikamu uye simbi inodziyirwa kune imwe tembiricha kuti iyo simbi inyungudike, uye simbi kupararira kunoitika pane inoenderana uye kuumba yekubatanidza dura, kuti uone iyo simbi yekumonera.
Kana uchipisa, bata simbi inogadzirwa nemagetsi neruoko rwerudyi sezviri kuratidzwa muFiri. 1-20, wobata chinhu kana waya neruoko rweruboshwe nemipapuro yemhino kana zvigunwe. Usati waisa simbi, simbi yemagetsi inofanira kuve yakanyatso gadziridzwa. Imwe huwandu hweserver inofanira kutakurwa pamucheto weiyo soldering iron musoro. Isa pamucheto wemusoro wedare resimbi padhuze nejoka re solder. Iyo simbi yemagetsi ingangoita 60 ° kune yakatwasuka ndege. Nekuda kwekufambisa kuyerera kwetini yakanyungudutswa kubva kumusoro weiyo yakasungirirwa kuenda kujoini yakasungirirwa. Iyo yekuchengetedza nguva yemusoro wekusungira pane iyo solder mubatanidzwa inofanirwa kudzorwa mukati me 2-3 masekondi. Simudza musoro wesimbi, uye ruoko rweruboshwe rwakaramba rwakabata chinhu chacho. Mushure mekunge tini pamubatanidzwa we solder yatonhodzwa uye yakasimbiswa, ruoko rweruboshwe runogona kusunungurwa. Shandisa tweezers kudzosera waya inotungamira. Mushure mekusimbisa kuti haina kusununguka, unogona kucheka redundant lead lead neacheki mativi.
Purasitiki yekuwisira pfuti inoshandiswa zvakanyanya mukushambadzira jira, tarpaulin, isina mvura membrane, anti-seepage liner, isina mvura membrane, pombi, zvigadzirwa zvemagetsi, mota bhamba, pasi pevhu, pearl donje kugadzira, electroplating tangi, epurasitiki pombi, PP / Pe / PVC ndiro uye membrane chimiro kurongedza uye kugadzirisa kwenzvimbo geomembrane.
Izvo zvinorambidzwa kushandisa yakakuvara magetsi magetsi kana tambo yemagetsi kuchaja; zvinorambidzwa kuishandisa pasi pemamiriro ekunyanyisa kana munzvimbo ine tembiricha yakakwira (muzuva rinopisa kana mota inopisa); zvinorambidzwa kubvisa bhatiri uye kudzosera matanda akanaka uye asina kunaka; zvinorambidzwa kugogodza, kukanda, kutsika, uye kumonera pfuti yeglue; zvinorambidzwa kupinza simbi nyaya dzekunze muchiteshi chekuchaja; zvinorambidzwa kushandisa bhatiri rekunze kupa simba; mushure mekunge bhatiri raraswa, rinofanira kuiswa Terevhizheni kurapwa. Midziyo haifanire kushandiswa nevana kana nevanhu vane hurema hwepanyama kana hwepfungwa, kana kushaya ruzivo uye ruzivo, kunze kwekunge vari pasi pekutarisirwa kana kurairwa; tarisa vana kuti vasatambe nemidziyo. Kana tambo yemagetsi yemuchina uyu yakanganisika, inofanirwa kungotsiviwa nemupi webasa redu, izvo zvinodikanwa sechishandiso chakakosha uye / kana chikamu.
1, Ndokumbirawo kuti muverenge meseji yekuchengetedza uye mirairidzo musati mashandiswa. Ndapota chengeta bhuku rino rekushandisa mune ramangwana.
1. Usarega vanhu vasina kujairana nepfuti yeglue kana vasingazive iyi mirau yekuchengetedza uye mirairo inoshandisa pfuti yeglue.
2. Vana vari pasi pemasere havabvumirwi kuishandisa. Ita shuwa kuti tsvimbo yacho haiwanikwe kune vana vari pasi pemasere. Pane njodzi yekudzipwa kana ukamedza chimuti.
3. Vana nevanhu vane hurema hwepanyama, hwekunzwa kana hwepfungwa kana kushaya ruzivo neruzivo havabvumidzwe kushandisa pfuti dzeglue. Vana vanopfuura makore masere ekuberekwa uye vanhu vane hurema hwepanyama, hwekunzwa kana hwepfungwa kana kushaya ruzivo uye ruzivo vanogona kushandisa iyi pfuti yeglue kana vakatariswa nemunhu anotarisira kuchengetedzeka kwavo kana vakarairwa nemuchengeti nezvekushandisa pfuti yeglue, uye vakanzwisisa yekuchengetedza mirau nemirairo.
4. Vana havabvumidzwe kutsvaira, kuchengetedza uye kushandisa pfuti yeglue pasina tarisiro.
5. Tarisa pfuti yeglue usati washandisa. Kana kamwe pfuti yeglue nemutsara wekuchaja zvikawanikwa zvichikuvara, hazvifanirwe kushandiswa. Ndapota usavhure pfuti yeglue uri wega. Nyanzvi dzehunyanzvi chete ndidzo dzinogona kushandisa izvo zvekutanga zvekugadzirisa
6. Mushure mekunge pfuti yeglue yaiswa pamusoro, haitenderwe kuti isatarisirwe.
7. Usabata mbutu nesilicone sleeve.
8. Nyanzvi dzinokwanisa chete ndidzo dzinobvumidzwa kushandisa zvisikwa zvepakutanga kugadzirisa pfuti yeglue. Chete nenzira iyi ndipo panogona kuve nechokwadi chekuita kwechigadzirwa.
9. Hazvibvumirwi kushandisa pfuti yeglue kana yakanyoroveswa mumvura kana kunyorova.
10. Usakande tsvimbo mumoto.
2, Kuchengetedzwa kwemitemo pakubhadharisa
1. Usabhadharise mukushandisa, usabhadharise mabhatiri ekupisa.
2. Hazvibvumirwe kubhadharisa patafura inogona kutsva (senge bepa, jira, jira, nezvimwewo) kana munzvimbo inotsva.
3. Usabhadharise mumvura kana pakanyorovera.
3, Product uye waivako tsananguro
1, pfuti dzeglue dzakakodzera solvent yemahara kubatana, senge bepa, mapepa, kokoro, huni, dehwe, machira, furo, mamwe mapurasitiki, keramiki, porcelain, girazi nematombo.
2. Inokodzera kubatanidza, kugadzirisa, kushongedza uye modelling.
3. Hazvina kukodzera zvinhu zvine bonding tembiricha yemadhigirii makumi mashanu uye pamusoro.
4. Izvo hazvina kukodzera kusunga zvinhu zvakabatana zvakananga nemvura kana mvura.
Ndokumbirawo udzore bhatani bhatani, iro bhuruu rebhuru rinenge riripo.
Ndokumbira utore bhatani rekuchinja kumberi kuratidza kuti switch irimo.
3. Kana mwenje webhuruu wakadzimwa, unofanirwa kubhadhariswa munguva. Rambi dzvuku riri kuvhura panguva yekuchaja.
4. Mwenje wegirini unogara uripo, zvichiratidza kuti magetsi akazara
5. Ndapota chengeta pfuti yeglue yakavharwa zvakachengeteka mushure mekushandisa, uye ita kuti itonhore zvakakwana usati warongedza. Pombi yekupisa pfuti inogona kukonzera kukuvara.
6. Dzivirira vanhu nemhuka kubva paglue inopisa nemumuromo. Kana ganda rinopisa rikasangana neganda, sukurudza ipapo nemvura inotonhorera kwemaminetsi mashoma. Usaedze kubvisa glue inopisa kubva paganda.
7. Kunonamira chete tembiricha yakaderera (tembiricha inonyungudika iri pakati pe100 ne150 ℃) ine dhayamita ye6.8-7.2mm inogona kushandiswa.
8. Usashandise tembiricha yakakwira yekunamatira tsvimbo.
9. Inobatwa nemvura, hunyoro uye kupisa kwakanyanya, izvo zvinonamira zvikamu zvinogona kudonha zvega.
5, Kubatanidza kugadzirira
1. Nzvimbo yekubatanidza inofanira kunge yakachena, yakaoma uye isina girisi.
2.Midziyo ine namira haigone kupisa.
3. Ndokumbira utange waedza kushanda kwechinhu chakapisa neiyo sampuro yekushandira.
4. Iyo tembiricha iri pakati uye tembiricha yeiyo workpiece inosunganidzwa ndeye 5 ℃ - 50 ℃.
5. Iyo ficha inogona kuita iyo inopisa inyauka kunamatira inotonhorera nekukasira inofanirwa kufanirwa kufuridzirwa neanopisa mweya pfuti
Kukundikana kunokonzera uye kurapwa matanho
1. Isa tsvimbo yerabha mugomba rekudyisa.
2. Vhura pfuti yeglue uye upise kwemasekonzi 180 usati washandisa.
3. Iyo glue inogona kushandiswa nekudzvanya iyo bhodhi muchina.
4. Pakarepo mushure mekuisa iyo inonamira yakanyunguduka inonamira, svina zvinhu kuti ubatanidzwe pamwechete kwemasekondi gumi kusvika makumi matatu. Nzvimbo yekubatanidza inogona zvakare kugadziriswa.
Mushure mekutonhora kwemaminitsi mashanu, chinzvimbo chekubatanidza chinogona kutakurwa.
5. Chenjerera kuti usashandise chero chikamu chemuviri chakanangana neicho chinopisa chinonamatira panguva ino.
6. Nzvimbo yekubatanidza inogona kupendwa kana kuvezwa.
1. Mushure mekutonhodza, bvisa guruu yakasara nechiridzwa chisina kujeka. Kana zvichidikanwa, sunungura chinzvimbo chekubatanidza zvakare nekupisa.
2. Ndapota chengeta pfuti yeglue yakavharwa zvakachengeteka mushure mekushandisa, uye ita kuti itonhore zvakakwana usati warongedza. Iyo yekupisa pfuti muromo inogona kukonzera kukuvara.
3. Usashandise zvinonyungudika zvinotsvaira kuchenesa chinzvimbo chekubatanidza. Iyo inopisa inopisa inonamira zvakasara pane zvipfeko hazvigone kubviswa.
4. Kutonhora uye chengetedza munzvimbo yakaoma isingasvikirwe nevana vari pasi pemasere.
Matambudziko, zvinokonzera uye matanho ekurapa
Kudyiwa kweglue stick kunonetsa uye pfuti yeglue haina kupisa zvakakwana. Pisai zvakakwana kwemasekonzi 180
Kudyisa nekukurumidza zvakanyanya
Low bhatiri kuchaja iyo bhatiri
Iyo tembiricha inonyunguduka yeglue stick yakanyanya. Shandisa iyo yakakurudzirwa yekutanga tanda yerabha
Iyo inopisa inonyungudutsa glue inoyerera ichidzokera kumashure kune iyo pfuti yeglue. Iyo dhayamita yeiyo tsvimbo yeglue yakanyanya kushoma. Shandisa iyo yakakurudzirwa yekutanga glue tsvimbo
Kana uchidyisa zvine simba, tsvimbo yerabha haina kunyungudika zvachose, uyezve fudza mushure mekunge tsvimbo yeglue yanyungudika
Pakupera kwekunamira, kana pfuti yeglue ichibviswa panzvimbo yekubatanidza, "filament" ichaumbwa. Pakupera kwekunamira, iyo glue ichiri kubuda. Chinja glue kuburitsa panopera gelatinization.
Pukuta iyo inopisa yakanyunguduka glue kubva pamuromo. Pakupera kwegluing, suka kamuki neiyo workpiece
Pashure: Cheni, yekusimudza cheni, kwakakurudzira cheni, isina simbi cheni, kwakasiyana kurondedzerwa
Zvadaro: Jack, yakatwasuka jack, yakamira jack, hydraulic jack
Glue Anonamira Pfuti
Hot Glue Pfuti
Mini Inopisa Inonamira Glue Pfuti